ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ & အခြေအနေများ | CAUSE
Last updated: 10 စက်တင်ဘာလ 2018
At stopsafeschools.comကျနော်တို့ဖောက်သည်တစ်ဦးနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ website ကိုမှအွန်လိုင်းဧည့်သည်အဖြစ်သင့် privacy ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်ကျူးလွန်နေကြသည်။ ကျနော်တို့ကိုသင်ပေးသောဝန်ဆောင်မှုများကိုတိုးမြှင့်ဖို့သငျသညျအကွောငျးကိုကျနော်တို့စုဆောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုသုံးပါ။ ငါတို့သည်သင်တို့ကပေးအပ်အချက်အလက်များ၏ privacy နဲ့လျှို့ဝှက်ချက်များကိုလေးစားခြင်းနှင့်သြစတြေးလျသီးသန့်လုံခြုံရေးအခြေခံမူလိုက်နာ။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောကျွန်ုပ်တို့၏ privacy ကိုမူဝါဒကဂရုတစိုက်ဖတ်ပါ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုကြှနျုပျတို့၏ website သို့မဟုတ်အသုံးပြုခြင်းကိုရန်သင့်လည်ပတ်မှု၏သင်တန်းတွင်, ငါတို့သည်သင်တို့နှင့် ပတ်သက်. အောက်ပါအချက်အလက်များကိုရယူနိုင်တယ်: အမည်, ကုမ္ပဏီအမည်, အီးမေးလ်လိပ်စာ, တယ်လီဖုန်းနံပါတ်, ခရက်ဒစ်ကဒ်အသေးစိတ်ငွေတောင်းခံလိပ်စာ, ပထဝီတည်နေရာ, အိုင်ပီလိပ်စာ, စစ်တမ်းတုံ့ပြန်မှု, ထောက်ခံမှုမေးမြန်းချက်, ဘလော့မှတ်ချက်များနှင့်လူမှုရေးမီဒီယာလက်ကိုင် (အတူတူ '' ကိုယ်ပိုင်ဒေတာများ ') ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကို 18 အောက်မှာပုဂ္ဂိုလ်များမှညွှန်ကြားကြသည်မဟုတ်ကျနော်တို့သိလျက် 18 အောက်မှာမည်သူမဆိုထံမှကိုယ်ရေးဒေတာများကိုစုဆောင်းကြပါဘူး။ ကျနော်တို့ 18 အောက်မှာကလေးတစ်ဦးကိုယ်ပိုင်ဒေတာများနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုပေးတော်မူကြောင်းကိုသတိပြုမိဖြစ်လာလျှင်, ငါတို့သည်တတ်နိုင်သလောက်မြန်မြန်သတင်းအချက်အလက်ကိုဖျက်ပစ်ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျကလေးတစ်ဦး၏မိဘသို့မဟုတ်အုပ်ထိန်းသူများမှာနှင့်သင်တို့သည်သင်တို့၏သဘောတူညီချက်မပါဘဲကိုယ်ပိုင်ဒေတာများနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုပေးကိုယုံကြည်လျှင်, ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
သင်, မှန်ကန်သော, update ကိုပြန်လည်သုံးသပ်သို့မဟုတ်ဖြစ်စေသင့်အကောင့်သို့ logging နှင့်အပြောင်းအလဲများကိုကိုယ့်ကိုကိုယ်ဖြစ်စေချင်တဲ့အဲဒီလိုလုပ်ဖို့တိုက်ရိုက်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဒေတာများကိုဖျက်ပစ်နိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်ပိုင်အမှတ်အသားကိုပြန်ကြားရေး: သင်တို့နှင့်အတူအဆက်သွယ်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုပေး, နောက်ဆုံးသတင်းများနှင့်ကမ်းလှမ်းမှုများသင့်အားအကြောင်းကြား, အသုံးဝင်သောအကြောင်းအရာမျှဝေခြင်း, ဖောက်သည်ကျေနပ်မှုတိုင်းတာခြင်း, ပြဿနာများကိုဖော်ထုတ်နှင့်ကိုယ်ပိုင်အမှတ်သညာအားဖြင့်သင်တို့ကိုထောက်ပံ့: ကျနော်တို့အပါအဝင်ငါတို့သည်သင်တို့ငါတို့၏ကိုယ်ဝန်ဆောင်မှုများကိုကယ်နှုတ်စုဆောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုသုံးပါ website ကအတွေ့အကြုံကို။
သငျသညျမေတ္တာရပ်ခံသို့မဟုတ်သူတို့ကိုပေးသွင်းပြီးလျှင်စျေးကွက်ဆက်သွယ်ရေးသာသင်တို့ဆီသို့စေလွှတ်။ သငျသညျဆက်လက်မရယူရန်လုပ်ရာတွင်သို့မဟုတ်အီးမေးလ်ပို့ခြင်းကျွန်တော်တို့ကိုနှင့်သင့်တောင်းဆိုချက်ကိုချက်ချင်း actioned ပါလိမ့်မည်အားဖြင့်မည်သည့်အချိန်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဆက်သွယ်ရေးထဲကရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
non-ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖေါ်ထုတ်ပြန်ကြားရေး: ကြှနျုပျတို့၏ website စီမံခန့်ခွဲအစီရင်ခံစာများနှင့် analytics ထုတ်လုပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုကြော်ငြာ, အသုံးပြုသူတောင်းဆိုချက်များကိုဖော်ထုတ်နှင့်ဖောက်သည်တွေ့ဆုံကူညီယေဘုယျအားဖြင့်လိုအပ်ပါသည်: ငါတို့သည်လည်းအပါအဝင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့န်ဆောင်မှုများတိုးတက်စေရန်စုပေါင်းနှင့်အမည်ဝှက်ပုံစံများအတွက်စုဆောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုသုံးပါ ။
သငျသညျ, ထိုကဲ့သို့သောကျွန်တော်တို့ရဲ့ website တွင်ဘလော့ဂ်မှတ်ချက်များနှင့်ထောက်ခံစာများအဖြစ်, လူသိရှင်ကြားရရှိနိုင်စေရန်ရှေးခယျြမဆိုသတင်းအချက်အလက်ကြည့်ဖို့တခြားသူတွေကိုမရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။ သငျသညျနောက်ပိုင်းတွင်ဤသတင်းအချက်အလက်ကိုဖယ်ရှားလိုလျှင်, မိတ္တူကိုအခြားကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာသို့မဟုတ်အခြားသူများကူးယူသို့မဟုတ်သတင်းအချက်အလက်များသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လျှင် cached နှင့်မော်ကွန်းတင်စာမျက်နှာများတွင်ကြည့်ရှုနိုင်သည်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အပိုင်သို့မဟုတ်ထိန်းချုပ်မှုရှိနေစဉ်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုကာကွယ်ရန်အားလုံးကျိုးကြောင်းဆီလျော်နည်းလမ်းများသုံးလိမ့်မည်။ ငါတို့သည်သင်တို့ထံမှလက်ခံရရှိအားလုံးသတင်းအချက်အလက်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲသုံးစွဲခြင်းသို့မဟုတ်ဝင်ရောက်ခွင့်ထံမှသိမ်းဆည်းထားနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လုံခြုံ server များပေါ်တွင်ကာကွယ်ထားသည်။ ခရက်ဒစ်ကဒ်သတင်းအချက်အလက်ဂီယာမတိုင်မီ encrypted ဖြစ်ပါတယ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆာဗာများအပေါ်ကိုမသိမ်းထားပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကယ်လွှတ်ခြင်းငှါကျွန်တော်တို့ကို enable လုပ်ဖို့ကျနော်တို့သြစတြေးလျားထက်အခြားတိုင်းပြည်များတွင်သိုလှောင်မှုနဲ့အပြောင်းအလဲနဲ့အဘို့နယ်စပ်ကိုဖြတ်ပြီး, ကိုယ်ပိုင်ဒေတာများအပါအဝင်ငါတို့သည်သင်တို့နှင့် ပတ်သက်. စုဆောင်းကြောင့်သတင်းအချက်အလက်, လွှဲပြောင်းပေမည်။ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဒေတာများကိုလွှဲပြောင်းခြင်းနှင့်သြစတြေးလျအပြင်ဘက်လုပ်ငန်းများ၌သည်ဆိုပါကသာလုံလောက်သော privacy ကိုအကာအကွယ်ရှိသည်သောနိုင်ငံများသို့ပြောင်းရွှေ့လိမ့်မည်။
cookies နဲ့ pixel
တစ်ဦးက cookie ကိုသင်၏ဝဘ် browsing အတွက်အပြုအမူနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်းသင့် web browser ကိုထားသေးငယ်တဲ့ဖိုင်ဖြစ်ပါသည်။ cookies များကိုအသုံးပြုခြင်း website တစ်ခုကသင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ဦးစားပေးရန်၎င်း၏ configuration ကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ cookies သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်မည်သည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဒေတာများ (ဥပမာနာမည်, လိပ်စာ, အီးမေးလိပ်စာသို့မဟုတ်တယ်လီဖုန်းနံပါတ်) ရက်နေ့တွင်သိမ်းထားတဲ့အချက်အလက်တွေကိုရယူကြပါဘူး။ အများစုက web browsers တွေအလိုအလြောကျ cookies တွေကို accept ပေမယ့်သင့် browser setting ကိုပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် cookies တွေကိုငြင်းပယ်ဖို့ရှေးခယျြနိုငျသညျ။ ဤသည်, သို့သော်, ငါတို့၏ website ၏အပြည့်အဝအားသာချက်ယူပြီးထံမှသင်တို့တားဆီးနိုငျသညျ။
ကျွန်ုပ်တို့၏က်ဘ်ဆိုက်, က်ဘ်ဆိုက်အသွားအလာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလူမှုမီဒီယာခွဲဝေမှုနှင့်အကြိုက်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းများကိုကျွန်တော်တို့ကိုပိုကောင်းတဲ့ website ကဧည့်သည်အတွေ့အကြုံများကိုကူညီရန် cookies များကိုအသုံးပြုသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, cookies နဲ့ pixels ကိုထိုကဲ့သို့သော Google က AdWords ၏နှင့် Facebook ကြော်ငြာအဖြစ်တတိယပါတီန်ဆောင်မှုမှတဆင့်က်ဘ်ဆိုက်ဧည့်သည်များမှသက်ဆိုင်ရာကြော်ငြာတွေအစေခံရန်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဤကြော်ငြာများဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ဒါမှမဟုတ်သင်သွားရောက်ကြည့်ရှုသည်အခြားကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာပေါ်လာလိမ့်မည်။
third party သင်၏သတင်းအချက်အလက်များကိုမျှဝေခြင်း
သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဒေတာများကအသေးစိတ်ကြောင့်ပညတ်တရားအားဖြင့်လိုအပ်သောအခါသာငွေပေးချေအပြောင်းအလဲနဲ့အဘို့, သင်ဝယ်ယူသောကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုအဘို့, တတိယပါတီပေးသွင်းဖို့ထုတ်ဖော်နေကြသည်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မူပိုင်ခွင့်, အမှတ်တံဆိပ်နှင့်အခြားဥပဒေရေးရာအခွင့်အရေးများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်။ ကြောင်းပါတီဒီ privacy ကိုမူဝါဒနှင့်သက်ဆိုင်သောဥပဒေနှင့်အညီဖော်ပြထားသကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့၏ privacy ကိုစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အတူလိုက်လျောဖို့သဘောတူလိုက်ပါတယ်လျှင်ကျွန်တော်တစ်ဦးဝန်ဆောင်မှုပေးနှင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဒေတာများကိုဝေမျှပြုကြသောအတိုင်းအတာအထိကျနော်တို့သာအဲဒီလိုလိမ့်မယ်။ တတိယပါတီနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့၏ကန်ထရိုက်က shared ခံခဲ့ရသောအထက်အခြားမည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်အဘို့သင့်ကိုယ်ပိုင်ဒေတာများကိုမဆို အသုံးပြု. မှသူတို့ကိုတားမြစ်။
ကျနော်တို့အခြိနျမှနျမှထိုကဲ့သို့သောဥပဒေ, စည်းမျဉ်း, တရားရုံးအမိန့်, ဆင့်ခေါ်စာ, ဝရမ်းအဖြစ်တရားဝင်လိုအပ်ချက်, လိုက်နာရန်, သင့်ကိုယ်ပိုင်ဒေတာများပါဝင်သည်ရသော, အချို့သတင်းအချက်အလက်ထုတ်ဖော်ရန်လိုအပ်နိုင်ပါသည်, တရားဝင်အမှုတွဲများ၏သင်တန်းတွင်သို့မဟုတ်တုံ့ပြန် တစ်ဦးဥပဒေစိုးမိုးရေးအေဂျင်စီတောင်းဆိုချက်ကို။ ဒါ့အပြင်ကျနော်တို့၏အခွင့်အရေး, ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုသို့မဟုတ်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိုကာကွယ်ပေးရန်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဒေတာများကိုသုံးနိုင်ပါသည် stopsafeschools.comကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်သို့မဟုတ်တတိယပါတီများ။
သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဒေတာများပါဝင်သည်ရသောကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုတထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုအပြောင်းအလဲဖောက်သည်သတင်းအချက်အလက် (ပိုင်ဆိုင်မှုကုမ္ပဏီနှစ်ခုမပေါင်း, ရောင်းချ, လွှဲပြောင်းသို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်အားဖြင့်ရှိမရှိ), ရှိလျှင်, လျှို့ဝှက်သဘောတူညီချက်အောက်မှာတစ်ဦးဝယ်ယူလွှဲပြောင်းနိုငျသညျ။ ကျနော်တို့သာကောင်းသောယုံကြည်ခြင်းနှင့်ရှိရာအထက်အခြေအနေမဆိုလိုအပ်သော၌သင်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ဒေတာများကိုထုတ်ဖော်လိမ့်မယ်။
အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များ Links များ
ဒီ website အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များလင့်များင်နိုင်ပါသည်။ ဤရွေ့ကားလင့်များသာသင့်ရဲ့အဆင်ပြေစေရန်ရည်ရွယ်နေကြသည်။ တတိယပါတီဝက်ဘ်ဆိုဒ်များမှ links စပွန်ဆာသို့မဟုတ်ထောက်ခံချက်သို့မဟုတ်ဤဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏ခွင့်ပြုချက်ဖွဲ့စည်းကြပါဘူး။ အဲဒီလိုအခြားသော website ၏ privacy ကိုအလေ့အကျင့်အတွက်တာဝန်ရှိသည်မဟုတ် ကျေးဇူးပြု. သတိပြုပါ။ သူတို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ website ကိုစွန့်ခွာတဲ့အခါမှာကျနော်တို့တစ်ဦးချင်းစီ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဆိုင်ရာထုတ်ပြန်ချက်များနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသတ်မှတ်သတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်းသော website ကိုဖတ်ရှုဖို့, သတိထားပါ, ငါတို့၏အသုံးပြုသူများကတိုက်တွန်းပါသည်။ ဒါဟာ privacy ကိုမူဝါဒကဤဆိုဒ်အားဖြင့်စုဆောင်းသတင်းအချက်အလက်မှတစ်ခုတည်းကိုသာသက်ဆိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ privacy ကိုမူဝါဒကလက်ရှိဖြစ်နေဆဲသေချာစေရန်စီစဉ်ထားသည့်အတိုင်းဤမူဝါဒကိုပြောင်းလဲရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်ခုတည်းသောသမ္မာသတိရှိသည့်အချိန်တွင်မဆိုဤမူဝါဒပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းငှါလူအပေါင်းတို့ပြုပြင်မွမ်းမံချက်ချင်းဤ website ပေါ်တွင်ပြုပြင်မွမ်းမံကျွန်တော်တို့ရဲ့ပို့စ်အပေါ်သို့ထိရောက်သောဖြစ်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ privacy ကိုမူဝါဒကပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့အခါအားလျော်စွာပြန်လာပါ။
သင်တို့သည်ငါတို့၏ privacy ကိုမူဝါဒကသို့မဟုတ်သင့်ကိုယ်ပိုင်ဒေတာများကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်. မည်သည့်အချိန်ကမည်သည့်မေးခွန်းများကိုသို့မဟုတ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိပါကမှာကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် https://www.stopsafeschools.com/contact ကျနော်တို့ 48 နာရီအတွင်းတုံ့ပြန်မည်။
ကြှနျုပျတို့၏ website မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။ သငျသညျအုပ်ချုပ်ရာအတူတကွကျွန်တော်တို့ရဲ့ privacy ကိုမူဝါဒနှင့် website ကိုမသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်နှင့်အတူ, သင်တို့နှင့်အတူလိုက်နာရန်သဘောတူကြသည်နှင့်အသုံးပြုခြင်း၏အောက်ပါစည်းကမ်းချက်များနှင့်အခြေအနေများအားဖြင့်ချည်နှောင်လျက်ရမည်ကိုဤ website ကို browse နှင့်သုံးစွဲဖို့ဆက်လက်ပါလျှင် stopsafeschools.com'' s ကိုဤ website ၏သင့်အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. သင်တို့နှင့်အတူအကြားဆက်ဆံရေး။
ဒီ website ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်, သင်အသုံးပြုမှုဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကိုသင့်ရဲ့လက်ခံမှုကိုဆိုလို။ ဤဝေါဟာရများနှင့်အခြေအနေများကို၏ရည်ရွယ်ချက်, "Us", "ကျွန်ုပ်တို့၏" နှင့် "ကျနော်တို့က" ကိုရည်ညွှန်းသည် stopsafeschools.com နှင့် "သင်" နှင့် "သင့်" ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website ကို အသုံးပြု. client ကို, ဧည့်သည်, က်ဘ်ဆိုက်အသုံးပြုသူသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသင်ကိုရည်ညွှန်းသည်။
ကျနော်တို့သည့်အချိန်တွင်မဆိုဤဝေါဟာရများ၏ဝေမျှပြောင်းလဲပြုပြင်မွမ်းမံ, add သို့မဟုတ်ဖယ်ရှားပစ်ရန်ညာဘက်ရှိသည်။ ကြိုတင်သင်သည်မည်သည့်အပြောင်းအလဲများသတိပြုမိကြသည်သေချာစေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ website ကို အသုံးပြု. ပုံမှန်ဤဝေါဟာရများကိုစစ်ဆေးပါ။ ကျနော်တို့ဘယ်မှာဖြစ်နိုင်ပါသည်သင်မည်သည့်သိသာထင်ရှားသောသို့မဟုတ်ထိရောက်သောအပြောင်းအလဲများမီးမောင်းထိုးပြနျကွိုးစားပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျကြှနျုပျတို့၏ website သုံးစွဲဖို့ရှေးခယျြလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤဝေါဟာရများကိုသင်နှင့်အုပ်ချုပ်ကြောင်းကိုသင်၏သဘောတူညီချက်နှင့်လက်ခံမှုနိဂုံးပိုင်းသက်သေအထောက်အထားအဖြစ်အသုံးပြုခြင်းကိုမှတ်ပါလိမ့်မယ် stopsafeschools.com'' s ကိုတစ်ဦးချင်းစီကတခြားမှအခွင့်အရေးနှင့်တာဝန်ဝတ္တရား။
ဒါဟာသင်သဘောတူသောငါတို့ website ကို အသုံးပြု. သင်သည်တစ်ခုမရှိမဖြစ်လိုအပ် Pre-အခြေအနေဖြစ်ပါသည်နှင့်လက်ခံ stopsafeschools.com သငျသညျအမှားအယွင်းများထံမှသို့မဟုတ်ပျက်ကွက်ရာမှကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရွက်စာတမ်းများသို့မဟုတ်သတင်းအချက်အလက်အတွက်ကျနော်တို့ပူဇော်စေခြင်းငှါမဆိုကုန်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်ဝက်ဘ်ဆိုက်၏အခြားမည်သည့်အသုံးပြုမှုအနေဖြင့်ဖြစ်စေ, ဝက်ဘ်ဆိုက်သင့်ရဲ့အသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်သောခံရစေခြင်းငှါ, မဆိုအရှုံးသို့မဟုတ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်တာဝန်ရှိတရားဝင်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာမဆိုတတိယပါတီအကြောင်းအရာ, လင့်များ, မှတ်ချက်များသို့မဟုတ်ကြော်ငြာများပေါ်တွင်သင်၏အသုံးပြုမှုသို့မဟုတ်မှီခိုပါဝင်သည်။ သင့်ရဲ့အသုံးပြုမှု, ဒါမှမဟုတ်အပေါ်မှီခိုအားထား, ဒီ website တွင်မဆိုသတင်းအချက်အလက်သို့မဟုတ်ပစ္စည်းများကျနော်တို့ထိုက်မဖြစ်လတံ့သောအဘို့သင့်ကိုယ်ပိုင်အန္တရာယ်မှာလုံးဝဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ website ကတဆင့်ရရှိနိုင်မဆိုထုတ်ကုန်များ, ဝန်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်သတင်းအချက်အလက်များသည်သင်၏တိကျတဲ့, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းကြောင်းသေချာစေရန်သင့်ကိုယ်ပိုင်တာဝန်ဖြစ်ရလိမ့်မည်။ သငျသညျထိုကဲ့သို့သောအချက်အလက်များနှင့်ပစ္စည်းများတိသို့မဟုတ်အမှားအယွင်းများဆံ့နိုင်ပြီးကျနော်တို့ဖော်ပြပညတ်တရားအားဖြင့်ခွင့်ပြုညျ့အဝအတိုင်းအတာအထိမည်သည့်ထိုကဲ့သို့သောတိသို့မဟုတ်အမှားအယွင်းများများအတွက်တာဝန်ယူမှုကိုဖယ်ထုတ်ကြောင်းဝန်ခံ။
ပြိုင်ဆိုင်မှုနှင့် CONSUMER ACT
အပိုင်း 2-51, တိုင်း 53 ၏ 64, 64 နှင့် 3A ဖို့အထူးသဖြင့်ကဏ္ဍများ2အတွက်သြစတြေးလျစားသုံးသူဥပဒေဇယား 1 သည်, ပြိုင်ပွဲနှင့်စားသုံးသူအက်ဥပဒေ 2010 ၏ Subdivision တစ်ဦးက (Cth) ၏ရည်ရွယ်ချက်, stopsafeschools.com'' s ကိုဒီသဘောတူညီချက်ဟာသက်တမ်းမဆိုချိုးဖောက်များအတွက်တာဝန်ယူမှုကိုကန့်သတ်ဟူနောက်တဖန်သင်တို့ဆီသို့ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှု၏ထောက်ပံ့; ကုန်ပစ္စည်းများ၏အစားထိုး; ဒါမှမဟုတ်ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုရှိခြင်း၏ကုန်ကျစရိတ်များ၏ငွေပေးချေမှုနောက်တဖန်သင်တို့ဆီသို့ထောက်ပံ့။
သင်ဤ website ကိုသုံးစွဲဖို့နှင့်မည်သည့်ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုဝယ်ယူအသက် 18 နှစ်အတွင်းဖြစ်ရမည်။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုန်ပစ္စည်းများသြစတြေးလျစာတိုက်နှင့် / သို့မဟုတ်အခြားဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ဆက်သားကုမ္ပဏီများကကယ်နှုတ်တော်မူ၏နိုင်ပါသည်။ Delivery အပြည့်အဝပေးချေမှုလက်ခံရရှိအပေါ်သို့ချက်ချင်းလုပ်ငန်းများ၌နေကြသည်။ ဖြန့်ဝေပေးပို့ option ကိုပေါ် မူတည်.2နှင့် 14 ရက်ပေါင်းအကြားယူနိုငျသညျ။ ပျက်ဆီးနေသောသို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရအမိန့်ကိုတိုက်ရိုက်သြစတြေးလျ Post ကိုဒါမှမဟုတ်ဆက်သားကုမ္ပဏီနှင့်အတူဖြေရှင်းရပါမည်နှင့်ကျွန်တော်အကူးအပြောင်းအတွက်ပျက်စီးသို့မဟုတ်လက်ခံရရှိကြသည်မဟုတ်ကြောင်းကုန်စည်များအတွက်တာဝန်ရှိနေကြသည်မဟုတ်။ ပျက်စီးသို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပစ္စည်းများအစားထိုး၏ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်ဖန်ဆင်းထားသည် stopsafeschools.com.
ဒစ်ဂျစ်တယ်ကုန်ပစ္စည်းများချက်ချင်းကိုအပ်ရသည်။ မည်သည့် software နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ကုန်ပစ္စည်းများဒေါင်းလုပ်နဲ့ဆက်စပ်မွေးရာပါအန္တရာယ်များရှိပါတယ် ကျေးဇူးပြု. သတိပြုပါ။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ကုန်စည်မဆိုဒေါင်းလုပ်ကိုမဆိုနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများရှိသင့်ငါတို့သည်သင်တို့ကူညီရန်ကြိုးစားစေခြင်းငှါဒါကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
stopsafeschools.com ပြန်ကိုင်တွယ်နှင့်သြစတြေးလျစားသုံးသူအကာအကွယ်ပေးရေးဥပဒေပြဋ္ဌာန်းနှင့်အညီပြန်အမ်း process လုပ်တယ်။
သင်သည်သင်၏အမိန့်ပြန်လာရန်ဆန္ဒရှိသင့်ကြောင်းအတွင်းကျွန်တော်တို့ကိုအကြောင်းကြားကျေးဇူးပြုပြီး ပြန်လာဘို့ခိုင်လုံသောအကြောင်းပြချက်နှင့်အတူဝယ်ယူ၏ရက်ပေါင်း။ ငါတို့သည်သင်တို့၏တိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရန်သို့မဟုတ်နောက်ထပ်သင်ကူညီနိုင်ခြင်းမရှိသေးလျှင်, ငါတို့သည်ဝယ်ယူကုန်ပစ္စည်းများ၏အချိန်မီငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်းပေါ်မှာပြန်အမ်းငွေကို process ပါလိမ့်မယ်။ Unopened ကုန်စည်အပြည့်အဝအတွက်ငွေပြန်အမ်းလိမ့်မည်။ ပြန်အမ်းချက်ချင်းလုပ်ငန်းများ၌မည်ဖြစ်ပြီးငွေပေးချေမှုကိုသင်ငွေပေးချေမှုကိုဖန်ဆင်းသောတူညီသောနည်းလမ်းအားဖြင့်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ အားလုံးပြန်အမ်း၏ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်လုပ်နေကြတယ် stopsafeschools.com.
stopsafeschools.com အခြိနျမှနျမှ၎င်း၏ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ပေါ်ရှိအခြားဝဘ်ဆိုဒ်များ, ကြော်ငြာများနှင့်သင့်အဆင်ပြေသူများကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာသတင်းအချက်အလက်တွေမှလင့်များပေးနိုငျသညျ။ ဒါဟာသေချာပေါက်အကြားစပွန်ဆာ, ထောက်ခံချက်, ဒါမှမဟုတ်ခွင့်ပြုချက်သို့မဟုတ်အစီအစဉ်ဆိုလိုပါဘူး stopsafeschools.com ထိုဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏ပိုင်ရှင်များ။ stopsafeschools.com ယင်းနှင့်ဆက်စပ်တဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာတွေ့အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုမတာဝန်ကြာပါသည်။
stopsafeschools.com'' s ကိုက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်သောအဘို့တတိယပါတီများအားဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးသတင်းအချက်အလက်များသို့မဟုတ်ကြော်ငြာများပါဝင်နိုင်ပါသည် stopsafeschools.comတတိယအုပ်စုတွေကတိုက်ရိုက်သင်တို့ဆီသို့ပေးအပ်မဆိုသတင်းအချက်အလက်သို့မဟုတ်အကြံဉာဏ်သမျှမျှတာဝန်လက်ခံခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ကသာ '' ထောက်ခံချက် '' လုပ်နေပါတယ်နှင့်မည်သည့်အကွံဉာဏျပေးကြသည်မဟုတ်မဟုတ်သလိုကြှနျုပျတို့သညျဤကိစ်စတှငျလက်ခံရရှိမည်သည့်အကြံဉာဏ်တစ်စုံတစ်ရာတာဝန်ယူကြဘူး။
ပညတ်တရားအားဖြင့်ခွင့်ပြုညျ့အဝအတိုင်းအတာအထိ, stopsafeschools.com လုံးဝအားလုံးအာမခံ disclaims ဆိုအထူးသဖြင့်ရည်ရွယ်ချက်ကုန်သည်များနှင့်ကြံ့ခိုင်ရေး၏ဆိုလိုအာမခံဖို့ကန့်သတ်အပါအဝင်, ဒါပေမယ့်ဘဲ, ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသို့မဟုတ်ဆိုလို။ stopsafeschools.com စာရွက်စာတမ်းများ, ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုအမှားများကိုအခမဲ့ဖွစျလိမျ့မညျမအာမခံပေးသည်, ဒါမှမဟုတ်ချွတ်ယွင်းတညျ့ပါလိမ့်မည်, ဒါမှမဟုတ်ကြှနျုပျတို့၏ website သို့မဟုတ်ယင်း၏ server ကိုဗိုင်းရပ်စ်သို့မဟုတ်အခြားအန္တရာယ်ရှိသောအစိတ်အပိုင်းများအခမဲ့ကြောင်းကို။
ငါတို့သည်ခပ်သိမ်းသောကာလကျွန်တော်တို့ရဲ့ website တွင်အရှိဆုံးတိကျမှန်ကန်ယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်ကို up-to-date ဖြစ်အောင်သတင်းအချက်အလက်ရှိသည်ဖို့ကွိုးစားအားထုနေတုန်းကျနော်တို့ကိုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်မည်သည့်စာရွက်စာတမ်း, ထုတ်ကုန်, ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်း၏ရလဒ်နှင့် ပတ်သက်. မည်သည့်ကိုယ်စားပြုမှုခိုင်လုံသို့မဟုတ်စေပါဘူး, လင့်ခ်သို့မဟုတ်သတင်းအချက်အလက်များသည်၎င်း၏က်ဘ်ဆိုက်တွင်သို့မဟုတ်မိမိတို့၏မှန်ကန်မှုသကဲ့သို့, သင့်လျော်သော, တိကျမှန်ကန်မှု, ယုံကြည်စိတ်ချရ, ဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ရင်။
ဒါဟာ၏တာဝန်သည်သင်၏တစ်ခုတည်းသောတာဝန်ဖြစ်ပါတယ်မဟုတ် stopsafeschools.com ဝန်ဆောင်မှုများ, ပြုပြင်, ဒါမှမဟုတ်ဆုံးမခြင်းမဆိုအပေါင်းတို့နှင့်တကွကုန်ကျစရိတ်ကိုထမ်းရန်။ သင့်ရဲ့ပြည်နယ်သို့မဟုတ်ပိုင်နက်အတွင်းသက်ဆိုင်သောဥပဒေ, အခြို့သောအဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်သောအာမခံ၏အထူးသဖြင့်ချန်လှပ်သည်ဤချန်လှပ်ခွင့်မည်မဟုတ်ပါ။ အထက်ပါအချို့သည်သင်သည်လျှောက်ထားနိုင်မည်မဟုတ်ပါဒါပေမယ့်သင်ကဤ website ကိုသို့မဟုတ်ပါကတဆင့်ကမ်းလှမ်းခဲ့စေခြင်းငှါမဆိုကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ယူစေခြင်းငှါမဆိုစွန့်စားမှုသတိပြုမိကြသည်သေချာရပေမည်။ ဒါဟာအဲဒီလိုလုပ်ဖို့သင့်ရဲ့တာဝန်သာဖြစ်ပါသည်။
At stopsafeschools.comကျနော်တို့ဟာသင့်ရဲ့ privacy ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်ကျူးလွန်နေကြသည်။ ကျနော်တို့ကိုသင်ပေးသောဝန်ဆောင်မှုများကိုတိုးမြှင့်ဖို့သငျသညျအကွောငျးကိုကျနော်တို့စုဆောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုသုံးပါ။ ငါတို့သည်သင်တို့ကပေးအပ်အချက်အလက်များ၏ privacy နဲ့လျှို့ဝှက်ချက်များကိုလေးစားခြင်းနှင့်သြစတြေးလျသီးသန့်လုံခြုံရေးအခြေခံမူလိုက်နာ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့သီးခြားသီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီဂရုတစိုက်ဖတ်ပါ။
သငျသညျကိုအီးမေးလ်ကနေတဆင့်ရေးသားအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုအကြံပေးခွငျးအားဖွငျ့အခြိနျမသင့်ရဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ထံမှလက်ခံရရှိအားလုံးသတင်းအချက်အလက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုံခြုံဆာဗာများဖြင့်ကာကွယ်ထားသည်။ stopsafeschools.comကိုစလှေတျမီ '' s ကိုလုံခြုံ server ကို software ကိုအားလုံးဖောက်သည်သတင်းအချက်အလက်စာဝှက်ပေးတယ်။ ထို့အပြင်စုဆောင်းအားလုံးဖောက်သည် data တွေကိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲသုံးစွဲခြင်းသို့မဟုတ်ဝင်ရောက်ခွင့်ဆန့်ကျင်လုံခြုံသည်။ ခရက်ဒစ်ကဒ်သတင်းအချက်အလက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ server များပေါ်တွင်ကိုမသိမ်းထားပါ။
ကျနော်တို့ကိုမကျင့်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသို့မဟုတ်ဖောက်သည်သတင်းအချက်အလက်အတွက်ရောင်းချသို့မဟုတ်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ကျနော်တို့သို့သော်စျေးကွက်စာရင်းဇယားကိုဖန်တီးရန်, သင်၏နာမကိုမဆိုရည်ညွှန်းခြင်းမရှိဘဲယေဘုယျသဘောသင့်ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုအသုံးပြုနိုင်သည်အသုံးပြုသူတောင်းဆိုချက်များကိုဖော်ထုတ်ရန်နှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်များကိုတွေ့ဆုံအတွက်အထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ငါတို့သည်သင်တို့ကိုအခြားအသုံးပြုမှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုတိုးတက်စေပေမယ့်မပေးကြောင်းသတင်းအချက်အလက်များသုံးနိုင်ပါသည်။
stopsafeschools.com ကောင်းသောယုံကြည်ခြင်း၌သတင်းအချက်အလက်ထုတ်ဖော်ရန်, အချို့အခြေအနေများတွင်, လိုအပ်သောအဘယ်မှာစေခြင်းငှါ stopsafeschools.comအောက်ပါအခြေအနေများတွင်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါသည်: ပညတ်တရားအားဖြင့်သို့မဟုတ်မည်သည့်တရားရုံးတွင်အားဖွငျ့၎င်းငျး, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်သဘောတူညီချက်များမဆို၏စည်းကမ်းချက်များပြဋ္ဌာန်းရန်ခြင်းငှါ၎င်း, သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်သို့မဟုတ်တတိယပါတီများ၏အခွင့်အရေး, ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုသို့မဟုတ်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိုကာကွယ်ပေးရန်။
သင်သည်သူတို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသုံးပြုသူများအတွက်သို့မဟုတ်ပြည်တွင်းသုံးစွဲသူများသည်ဖြစ်စေ, အသုံးပြုသူများအဖို့အခကြေးငွေအဘို့ထိုသူတို့ပေး၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အလားတူစာရွက်စာတမ်းများ, ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုအတွက်စီးပွားရေး၌ရှိကြ၏လျှင်, သငျသညျတခုပြိုင်ဘက်များမှာ stopsafeschools.com. stopsafeschools.com ဖော်ပြမပါဝင်ပါနှင့်၎င်း၏ website ကနေမဆိုစာရွက်စာတမ်းများသို့မဟုတ်သတင်းအချက်အလက်ကို download လုပ်ပါသို့မဟုတ်တတိယပါတီမှတဆင့်မဆိုဤကဲ့သို့သောစာရွက်စာတမ်းများသို့မဟုတ်သတင်းအချက်အလက်ရရှိရန်, ငါတို့က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုသုံးပါသို့မဟုတ်ဝင်ရောက်ဖို့သငျသညျအခွင့်မပေးပါဘူး။ သငျသညျဖြစ်လျှင်ဤဝေါဟာရကိုချိုးဖောက်ခဲ့လျှင် stopsafeschools.com ကျနော်တို့ရေရှည်တည်တံ့ခြင်းနှင့်နောက်ထပ်သင်သည်ထိုကဲ့သို့သော unpermitted နှင့်မလျော်ကန်သောအသုံးပြုမှုအနေဖြင့်လုပ်စေခြင်းငှါ, အားလုံးအမြတ်အစွန်းအဘို့အသငျသညျတာဝန်ခံကိုင်စေခြင်းငှါမဆိုအရှုံးအဘို့အသငျသညျအပြည့်အဝတာဝန်ယူကိုင်ထားမည်ဖြစ်သည်။ stopsafeschools.com ကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်ခုတည်းသောသမ္မာသတိရှိကျွန်ုပ်တို့၏က်ဘ်ဆိုက်, ဝန်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်သတင်းအချက်အလက်မှမဆိုလူတစ်ဦး access ကိုဖယ်ထုတ်ခြင်းနှင့်ငြင်းပယ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
အသုံးပြုရန် COPYRIGHT, ကုန်အမှတ်တံဆိပ် and restrictive
ဒီ website ကပိုင်ဆိုင်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုလိုင်စင်ရထားတဲ့ပစ္စည်းပါရှိသည်။ ဤသည်ပစ္စည်းလည်းပါဝင်သည်ပေမယ့်ဒီဇိုင်း, layout ကိုကြည့်ရှု, ပုံပန်းသဏ္ဌာန်, အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်ဂရပ်ဖစ်, ကန့်သတ်မထားပါ။ သငျသညျရောင်းချခြင်းသို့မဟုတ်မည်သည့်တတိယပါတီအသုံးပြုမှုများ၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်စာရွက်စာတမ်းများ, သတင်းအချက်အလက်သို့မဟုတ်ပစ္စည်းများမျိုးပွားခွင့်ပြုမထားပေ။ အထူးသဖြင့်, သင်သည်ပြန်လည် upload တင်, အီလက်ထရောနစ်သို့မဟုတ်မဟုတ်ရင် transmit သို့မဟုတ်ဤ website တွင်အခြိနျမှနျမှ download ပြုလုပ်မရရှိနိုင်ပါစေခြင်းငှါ၎င်းပစ္စည်းများ, စာရွက်စာတမ်းများသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်မဆိုဖြန့်ဝေခွင့်ပြုမထားပေ။
stopsafeschools.com ဖော်ပြကြှနျုပျတို့၏ website ပေါ်မှာရှိသမျှစာရွက်စာတမ်းများ, သတင်းအချက်အလက်နှင့်ပစ္စည်းများအားလုံးကိုမူပိုင်ခွင့်နှင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ရှိသည်နှင့်အသင်တို့သည်ဤဝေါဟာရများကိုမဆိုချိုးဖောက်လျှင်ငါတို့သည်သင်တို့အရေးယူပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသို့မဟုတ်မည်သည့်ပုံစံအတွက် contents တွေကိုအားလုံး၏မဆိုပြန်လည်ခွဲဝေမှုသို့မဟုတ်မျိုးပွားအောက်ပါထက်အခြားတားမြစ်သည်: သင် print ထုတ်သို့မဟုတ်တစ်ခုတည်းသောသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်စီးပွားရေးမဟုတ်သောအသုံးပြုမှုအတွက်ဒေသခံတစ်ဦး hard disk ကိုကောက်နုတ်ချက်များထုတ်ယူဖို့ကို download လုပ်ပါမည် သင်သည်သူတို့၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသုံးပြုရန်တစ်ဦးချင်းတတိယပါတီများမှမှအကြောင်းအရာကော်ပီကူးစေခြင်းငှါ, သင်တို့မူကားပစ္စည်း၏အရင်းအမြစ်အဖြစ်ဝက်ဘ်ဆိုက်အသိအမှတ်ပြုမှသာလျှင်။
သင်တို့သည်ငါတို့၏ express ကိုစာဖြင့်ရေးသားခွင့်ပြုချက်ဖြင့် မှလွဲ. ဖြန့်ဝေသို့မဟုတ်စီးပွားဖြစ်အကြောင်းအရာ exploit, မပြုစေခြင်းငှါ။ မဟုတ်သလိုသင်ကထုတ်လွှင့်သို့မဟုတ်အခြားက်ဘ်ဆိုက်သို့မဟုတ်အီလက်ထရောနစ်ပြန်လည်ရယူခြင်းစနစ်၏အခြားအ form မှာကသိမ်းဆည်းထားလိမ့်မည်။
ဤဝေါဟာရများနှင့်အခြေအနေများကိုသင်တို့စပ်ကြားမြေတပြင်လုံးသဘောတူညီချက်ကိုယ်စားပြု stopsafeschools.com သင့်ရဲ့အသုံးပြုခြင်းနှင့်မှဝင်ရောက်ခွင့်ကိုရည်မှတ် stopsafeschools.com'' s ကိုက်ဘ်ဆိုက်နှင့်ပေါ်တွင်စာရွက်စာတမ်းများနှင့်သတင်းအချက်အလက်ရန်သင့်အသုံးပြုခြင်းနှင့်လက်လှမ်းမီ။ အဘယ်သူမျှမကအခြားအသုံးအနှုန်းကဓနသဟာယသို့မဟုတ်မည်သည့်ပြည်နယ်သို့မဟုတ်နယ်မြေတွေကိုမဆိုဥပဒေပြုခြင်းဖြင့်ထည့်သွင်းခံရဖို့လိုအပ်ပါသည်ဘယ်မှာမှတစ်ပါးကဤသဘောတူညီချက်တွင်ထည့်သွင်းရမည်။ ပညတ်တော်အားဖြင့်ဆိုလိုခြင်းနှင့်အရာဖော်ပြဖယ်ထုတ်ထားလို့မရနိုင်ပါသူတို့အား မှလွဲ. အားလုံးဆိုလိုအသုံးအနှုန်းများဤဥပဒေဖော်ပြဖယ်ထုတ်လိုက်ကြသည်။
အထက်တွင်ဆိုအပိုဒ်သို့မဟုတ်သက်တမ်းမဆိုသက်ဆိုင်ပညတ်တော်အတိုင်းထို့နောက်ထိုကဲ့သို့သောအပိုဒ်ကြောင်းပြည်နယ်သို့မဟုတ်နယ်မြေတွေကိုအတွက်လျှောက်ထားရမည်မဟုတ်နှင့်ဤဝေါဟာရများနှင့်အခြေအနေများကိုတွင်ထည့်သွင်းထားသည်ဖို့ဘယ်တော့မှမှတ်ယူရမည်, တရားမဝင်ပျက်ပြယ်, ဒါမှမဟုတ်မည်သည့်ပြည်နယ်သို့မဟုတ်နယ်မြေတွေကိုအတွက်မပြုနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်မှာ ကြောင်းပြည်နယ်သို့မဟုတ်နယ်မြေတွေကို။ ထိုကဲ့သို့သောအပိုဒ်ကိုအခြားပြည်နယ်သို့မဟုတ်နယ်မြေတွေကိုအတွက်ဥပဒေနှင့်အတည်ပြုလျှင်သူတို့အားသည်အခြားပြည်နယ်နှင့်နယ်မြေအတွက်အပြည့်အဝအတည်ပြုနှင့်ဤသဘောတူညီချက်၏တစိတ်တဒေသဖြစ်ဆက်လက်ရလိမ့်မည်။ ဒီအပိုဒ်အညီမည်သည့်အသုံးအနှုန်းများ၏ယူဆဖယ်ဤဝေါဟာရများနှင့်အခြေအနေများကို၏အခြားဝါကျ၏အပြည့်အဝဘက်တော်သားနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးကိုထိခိုက်သို့မဟုတ်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းမရှိရ။
ဒါဟာသဘောတူညီချက်နှင့်ဤ website ၏ဥပဒေများမှဘာသာရပ်များမှာ VICTORIA သြစတြေးလျ။ သင်နှင့်အကြားအငြင်းပွားမှုလည်းမရှိဆိုပါက stopsafeschools.com တရားအတွက်ရလဒ်တွေကိုထိုအခါသင်၏တရားရုံးများ၏တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်မှတင်သွင်းရမည်ဟု VICTORIA.